Silicon & Compound Semiconductors Fekitori, Vatengesi - China Silicon & Compound Semiconductors Vagadziri
Western Minmetals (SC) Corporation WMC inonyanya kupa 2-12 inch imwechete kristaro kana monocrystal silicon nekunyatso dhizaini uye kudhiza matekinoroji Czochralski CZ uye inoyerera Zone FZ kukura kristaro kubva ku polycrystalline silicon, uye kuwanda kwakawanda, kutenderera, kuchenesa, kucheka, etching uye kupora maitiro nezvimwe zvichidaro. Kristaro imwe chete yesilicon inonyanya kugadzirwa kwemaseketi akabatanidzwa, ma diode, thyristors, transistors, discrete zvinoriumba, simba mudziyo, simba MOSFET, IGBT uye seiyo substrate yeakakwira resolution particle kana Optical detectors nezvimwe.
Kutenda kune iyo Magnetic-munda-inosundirwa yakagadzirwa kune yakajairwa CZ ingot kudhonza, MCZ imwe chete yekristal silicon ndeye yakaderera oxygen mwero, dislocation uye yunifomu resistivity kusiyanisa, uye zvichienzaniswa yakaderera kudzikisira kushushikana. FZ silicon iri kuunza yakayangarara nzvimbo inonatsa tekinoroji kuverengera yunifomu yekuparadzira dopant, iyo yakaderera Resivistia kusiyanisa, kudzora huwandu hwetsvina, hupenyu hwakawanda hwekutakura uye pamwe neakanyanya kudzvinyirira tarisiro. Kunze kwezvo, FZ NTD (Neutron Transmutation Doping) silicon uye Epitaxial Silicon Wafer EPI yakagamuchirwa CVD anoshandiswa zvakanyanya mumagetsi ekugadzira nhema.
Kupa nyika-kirasi macomputer semiconductors, ayo anosanganisira asi asiri mashoma Gallium Arsenide GaAs, Indium Arsenide InAs, Gallium Antimonide GaSb, Indium Antimonide InSb, Indium Phosphide InP, Gallium Phosphide GaP, Silicon Carbide SiC, Gallium Nitride GaN nezvimwe zve LED, nano- integrated wedunhu, simba gudzazwi, optoelectronic sensors, michini yekuona michina, X-ray michina, magetsi ekufambisa michina & nyowani sosi sosi. Pamusoro pezvo, komputa inovimbisa Sapphire Aluminium oxide Al2O3 kristaro iri kuve inove yakakosha zvinhu mu optoelectronic, yakakwira frequency kutaurirana, aeronautics uye astronautics maindasitiri.
CZ Nesilicon chitete
FZ Nesilicon chitete
FZ NTD Nesilicon chitete
Imwe Crystal Silicon Ingot
Imwechete Crystal Germanium Wafer / Ingot
Sapphire Al2O3 Chitoro & Ingot